आज पनि निफ्राको १ लाख २८ हजार कित्ता सेयर बिक्री, कति पुग्यो मूल्य ? |
Home शेयर बजार आज पनि निफ्राको १ लाख २८ हजार कित्ता सेयर बिक्री, कति पुग्यो...
आज पनि निफ्राको १ लाख २८ हजार कित्ता सेयर बिक्री, कति पुग्यो मूल्य ?
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक(निफ्रा) को आज ४ करोड बढीको सेयर कारोबार भएको छ ।
सोमबार बैंकको ४ करोड ६० लाख ७७ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का अनुसार आज बैंकको १ लाख २८ हजार ५६८ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ ।बैंकको सेयर मूल्यमा भने झिनो वृद्धि भएको छ ।
सोमबार बैंकको सेयर मूल्य ०.९८ प्रतिशत अर्थात प्रतिकित्ता ३ रुपैयाँ ५० पैसाले बढेको छ ।योसंगै बैंकको सेयर मूल्य ३५८ रुपैयाँ ९० पैसा पुगेको छ ।